Home Somali News Somalia: Dagaal ka dhacay Bakool oo ay ka qeyb qaateen ciidamada Liyu...
Dagaal xoogleh ayaa shalay gelinkii danbe ka dhacay deegaanka Ceel Boon ee gobalka Bakool, goobtaasi oo ay ku dagaalameen maleeshiyaadka Al Shabaab iyo ciidamada Itoobiya ee AMISOM oo ay wehliyaan ciidamada Liyu booliis loo yaqaan ee deegaanka Soomaalida Itoobiya.
Deegaanka dagaalka ka dhacay ayaa u dhaxeeya magaalada Luuq iyo degmada Waajid ee gobalka Bakool, iyadoo la sheegayo in 11 maleeshiyada Al Shabaab ka tirsan dagaalka lagu dilay.
Gobalka Bakool ayaa kamid ah goobaha todobaadyadii lasoo dhaafay ay hawlgalada ka wadeen ciidamada Itoobiya ee gacanta Siinaya kuwa AMISOM. Maalmihii lasoo dhaafay ayaa waxaa soo baxayey warar sheegaya in ciidamo ka yimid Itooniya oo aan qeyb ka ahayn kuwa AMISOM ay hawlgalo ka wadaan gudaha Soomaaliya gaar ahaan gobalada dhexe iyo Hiiraan.
Wasiirka Gaashaandhiga Dowlada Federaalka Soomaaliya ayaa qiray inay jiraan ciidamo aan xubin ka ahayn AMISOM ee Itoobiya ka yimid oo gurmad usoo fidin karaan ciidamadooda ku sugan Soomaaliya.
Waxaa xiliga jira dhaq dhaqaaq xoogleh oo militari oo ka socdaa gobalada Hiiraan iyo Gedo oo ay ku sugan yihiin ciidamada Itoobiya ee hawlgalada wada, waxaa jira warar sheegaya in dhawaan ay bilaaban doonto duulaan ay AMISOM dooneyso inay ku qaado xoogaga Al Shabaab ee ku sugan gobalka Jubbada Dhexe.